Outlook 2007 တွင်အမှား 0x800ccc1a ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။ - Microsoft Outlook
အဓိက > Microsoft Outlook > 0x800ccc1a အလားအလာ 2007 ခုနှစ် - ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မှ
0x800ccc1a အလားအလာ 2007 ခုနှစ် - ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မှ
Outlook 2007 တွင်အမှား 0x800ccc1a ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ port နံပါတ် 465. ကိုပြောင်းလိုက်ပါ။ သင်လည်းအတူတူရလိမ့်မည်အမှားကုဒ် (0x800CCC1APOP ၀ င်သောမေးလ်ဆာဗာတစ်ခုမှစာကိုလက်ခံရရှိသောအခါ၊ သင်သည်စာဝှက်ခြင်းကိုဖွင့်ထားသော်လည်း port နံပါတ်မှာ 110 မဟုတ်လျှင် encryption port မဟုတ်သောနံပါတ်ဖြစ်သည်။
အမှားကုဒ် 0x800ccc1a ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ထိုကဲ့သို့သောမျိုးအမှားမှားယွင်းသော port နံပါတ်ကို SMTP သို့မဟုတ် POP3 ဆာဗာများတွင်သတ်မှတ်သောအခါပေါ်ပေါက်သည်။ ... ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအမှားSSL encryption ကို disable လုပ်ထားပါကသူ့ဟာသူမပြနိုင်ပါ။ သို့သော် SSL encryption ကိုလိုအပ်ပါကလိုက်ဖက်သည့် port နံပါတ် 465 ကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။
Outlook 2007 မှာ encryption ကိုဘယ်လိုပြောင်းနိူင်လဲ။
SSL / TLSစာဝှက်ခြင်းဘို့Outlook 2007
မိုက်ကရိုဆော့ကိုစတင်ပါOutlookအစီအစဉ်။ စတင်ရန် Start menu ကိုသုံးနိုင်သည်Outlook။ ...
The 'ပြောင်းလဲမှုအီးမေးလ်အကောင့် 'ဝင်းဒိုးဖွင့်လှစ်။ ...
Advanced settings tab ကိုဖွင့်ပါ။ ...
'Internet E-mail Settings' ၀ င်းဒိုးကိုပိတ်ရန် OK ကိုနှိပ်ပါ။ ...
Outlook 2007 မှာ indexing ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။
ဘယ်လိုOutlook 2007 ခုနှစ် Indexing ပြproblemsနာများကို Fix
Outlookကျန်ရှိနေသေးသော0ကုန်ပစ္စည်းများရှိသော်လည်းသင်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှာမှားနေဆဲဖြစ်သည်။ ...
ဘာကြောင့် Outx error 0x800ccc1a ရှိသနည်း။
Secure Socket Layer မှတဆင့်မေးလ်ဆာဗာကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းဆက်သွယ်မှုကိုမတည်ဆောက်နိုင်လျှင် 0x800ccc1a ဤအမှားမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အီးမေးလ်အကောင့်အတွက် SSL စာဝှက်စနစ်ကိုပိတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Outlook error 0x800ccc1a ကိုမည်သို့ပြင်ရမည်နည်း။
0x800ccc1a SMTP port နံပါတ်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ။
0x800ccc1a အမှားကိုပြုပြင်ရန်အများအားဖြင့်ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။ SSL စာဝှက်ခြင်းနှင့် SMTP & amp ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ POP ဆိပ်ကမ်းနံပါတ်ချိန်ညှိချက်များ ထိုကဲ့သို့သောအမှားများကိုလုံး ၀ ရှောင်ရှားရန်၊ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအမှားများ၏အကြောင်းပြချက်များကိုတားဆီးနိုင်သောအချို့သောဆက်တင်များကို ပြောင်းလဲ၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အကယ်၍ အမှားဆက်ရှိနေပါကသင်၏ Outlook application ကိုအသုံးမပြုရန်တားဆီးထားပါက PST ဖိုင်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက် Outlook software အတွက် Stellar Repair အတွက်ကြိုးစားပါ။ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးပါကဖိုင်ကိုပြန်လည်လည်ပတ်စေရန်အတွက် Outlook ထဲသို့တင်သွင်းပါ။